Warbaahinta Ugu Afka Dheer Kenya Oo Ka Hadlay Weerar Ka Dhacay Wajeer. – Bogga Calamada.com
Warbaahinta Ugu Afka Dheer Kenya Oo Ka Hadlay Weerar Ka Dhacay Wajeer.
Wargeyska Daily Nation ee laga leeyahay dalka Kenya ayaa xaqiijiyey in ciidamada Mujaahidiinta ee ka howlgala gobolka N.F.D ay ganiimeysteen dhamaan hubkii iyo rasaastii ay wateen ciidamadii lagu laayey weerarkii Axadii la soo dhaafay lagu qaaday ciidamada Kuffaarta Kenya xilli ay ku socdaalayeen deegaano ka tirsan gobolka Wajeer.
Wargeyska ayaa sheegay inuu helay warbixin loo soo gudbiyey taliska Police-ka dalka oo tibaaxeysa in Mujaahidiintu ay weerarka qorsheysan ku dileen ugu yaraan sideed askari, islamarkaana ay qaateen dhamaan hubkii iyo rasaastii ay wateen ciidanka.
Ciidamada la beegsaday ayaa isugu jiray shan askari oo ka tirsan Police-ka maamulka iyo saddex askari oo ka tirsan waxa loogu yeero Police-ka qaranka sida ay warbixintu sheegtay waxayna ku hubeysnaayeen 6 qori oo AK47 ah iyo laba qori oo lagu sheegay nooca loo yaqaano G3.
Warbixinta loo soo gudbiyey talisyada Police-ka ee Nairobi ayaa sidoo kale tilmaamaya in rasaasta ku jirtay qoryaha la qaatay ay gaareyso ilaa 540 baalooto oo ah dhamaan rasaastii ay askarta la dilay wateen.
Sarkaal ka tirsan maamulka Wajeer oo isagoo magaciisa qarinaya wareysi siiyey wargeyska Daily Nation ayaa sheegay in markii ay gurmad ahaan ku tageen halka uu weerarku ka dhacay aysan arkin wax hub ah oo yaalay goobta, uuna aaminsan yahay hubkaas uu ku maqan yahay gacanta Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Sarkaalkan ayaa sidoo kale tibaaxay in haddii hubkaas aysan qaadan dagaalyanada Al-Shabaab ee weerarka fuliyay ay suuragal tahay inuu ku maqan yahay dadka deegaanka kuwaas oo uu sheegay in mararka qaar qaateen hubka ciidamada Kenyaatiga haddii ay arkaan iyagoo meydad ah oo yaalla goobihii lagu beegsaday.
Weerarkan barakeysan ayaa Axadii la soo dhaafay ka dhacay wadada dheer ee isku xirta deegaanada Katulow iyo Bojigaras ee gobolka Wajeer halkaas oo Mujaahidiintu ay qarax xoogan kula beegsadeen gaari ciidan, ka dibna uu xigay weerar dhabagal ah oo Mujaahidiintu ay ku dhameystireen dhaawacyada cadowga, kuna ganiimeysteen agabkoodii dagaal.
Afhayeenka ciidanka Mujaahidiinta Sheykh Cabdil Casiis Abuu Muscab oo ka hadlay weerarkan ayaa sheegay in khasaaruhu uu ka badan yahay inta ay qirteen ciidamada Kuffaarta Kenya.
Wargeyska dilay Nation wuxuu sheegay in weerarka uu dhacay saacado un ka dib markii Mu’asasada Al-kataa’ib ay baahisay muuqaal la daawan karo muddo ku dhow hal saac ah oo lagu soo bandhigayo weeraro kala duwan oo ay Al-Shabaab ka fulisay gudaha Kenya.
Wargeyska Star oo isna kasoo baxa wadanka Kenya ayaa maanta soo daabacay warbixin uu cinwaan uga dhigay “Baaqyo ku saabsan amniga oo la jeediyey xilli Al-Shabaab ay soo saartay video” ayaa sheegay in weerarada lagu soo bandhigay filimka ay intooda badan dhaceen lixdii bilood ee ugu dambeysay, halka filimka cusub ee Alkataa’ib lagu soo gudiyey howlgalada lixdii bilood ee ugu dambeysay ay Mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha Kenya.
Star waxuu sidoo kale sheegtay in filimka uu soo bandhigayo nolosha iyo xuriyada ay dagaalyahanada Al-Shabaab ku heystaan Keyta Boni halkaas oo dowlada Kenya ay sanadkii la soo dhaafay sheegtay in ay ka sifeysay awoodda Mujaahidiinta.
Filimka Mu’asasada Al-Kataa’ib ayaa soo bandhigay silsilado weeraro ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolada Lamu iyo N.F.D ee gudaha Kenya kuwaas oo cagta lagu mariyey saldhigyo ciidanka, lagu dilay tobanaan Askari.
Taliska ciidanka Mujaahidiinta ayaa saacado ka dib markii la baahiyey muuqaalkas bogaadiyey howlgalada halyeeynimo ee ay Mujaahidiintu ka wadaan gobolada Muslimiintu leeyihiin ee ay Kenya xoogga ku haysato, islamarkaana soo dhaweeyey dadaalada ay mu’asasada Al-kataa’ib ku bixineyso soo bandhigidda nafhurka ay sameynayaan Mujaahidiinta.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa Jabahaat dagaal oo kala duwan ku furtay dowladda Kenya wixii ka dambeeyey sanadkii 2011-kii xilligaas oo dowladda Kenya ay si bareer ah ugu soo duushay dalkan Muslimka ah ee Soomaaliya, Waxayna Mujaahidiintu qaadeen duullaano iyo weeraro ballaaran oo jabiyey qabkii iyo car-carta Kuffaarta Kenya.